DEG DEG:- Askari ka tirsan ciidanka NISA oo goordhaw lagu dilay magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Askari ka tirsan ciidanka NISA oo goordhaw lagu dilay magaalada Muqdisho
Kooxo hubeysan ayaa caawa xaafadda Daba-kaayo Madoow ee degmada Dharkeenley ku dishay askari ka tirsanaa ciidanka nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka, xilli uu ku sugnaa meel aan sidaasi uga fogeyn xarunta NISA.
Askariga la dilay oo magaciisa lagu soo koobay Sheekeeye ayaa la sheegay in dhowr rasaas lagu dhuftay xilli uu ku sugnaa xaafadda Daba-kaayo Madoow oo u dhaw xarunta ciidanka nabad-sugidda qaranka ee NISA oo halkaasi ku taalla.
Dhinaca kale, kooxihii dilka u geystay askarigaasi ayaa islamarkiiba goobta isaga baxsaday, waxaana halkaasi soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa nabad-sugidda qaranka oo goobtaasi baaritaano ka sameeyay.
Ma jirto cid illaa iyo haatan baaritaankaasi lagu soo qabtay, sidoo kale ma jiraan cid sheegatay inay ka dambeysay dilka sarkaalkaas.
Si kastaba ha ahaatee, dilkaan ayaa kusoo beegmayaa xilli maanta suuq ku yaala degmada Wadajir uu ka dhacay qarax ismiidaamin ah oo ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 30 qof, iyadoona dhowr jeer hore ay degmooyinkaas ka dhaceen falal lidi ku ah ammaanka halkaas.